Assistant English Language Instructor - Young Learners ﻿
30.11.2019, Part time , Education / Training
ဘာသာစကားသင်ကြားရေးမှ တစ်ဆင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကိုဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်သော ကျောင်းသားလူငယ်မျာုးဖစ်လာစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ကြားပေးသောသင်တန်းကျောင်းအဖြစ် အတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.သမာရိုးကျ သင်ကြားမှုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ Modern Teaching Methods ဖြင့် ကလေးငယ်များပို၍ Creative ဖြစ်လာစေရန်၊ Self-confidence ရှိလာစေရန်၊ Independent Learner များဖြစ်လာစေရန် နှင့် မိမိကိုယ်ပိုင်အရည် အချင်းများထုတ်သုံးတတ်ရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးခြင်း။
•	အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
•	B.A (Eng) သို့မဟုတ် Dip in English ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။
•	အသက်(၅)နှစ်မှ (၁၄)နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်ပြီးကလေးချစ်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
We offer • Male/Female (10)posts
•	အခြေခံလစာမှာ ( တစ်ရက်လျှင် ၈၀၀၀မှ၁၅၀၀၀ကျပ်)အထိဖြစ်ပြီး အချိန်မှန်၊ရက်မှန်ကြေးခံစားခွင့်ရှိသည်။
Work location No.18, Myaynu Street, Myaynigone,Sanchaung Township, Yangon.
Company Industry: Assistant English Language Instructor - Young Learners
Today , Full time , 350 000 - 400 000 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀ကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စရေးရာများဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။ ကျောင်း၏ Repair and Maintainess ကိစ္စရပ်အားလုံးအစီအစဉ်ရေးဆွဲစီမံခန့်ခွဲခြင် ...
Today , Full time , 300 - 400 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။ ။အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်များအားထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ဒါရိုက်တာ၏နေ့တဒူဝကိစ္စရပ်များလစ်ဟင်းမှုမရှိအဆင်ပြေချောမွေ့စွာအလျင်မှီပြီးစီးအောင်မှုရှိအောင်လိုအပ်� ...
Today , Full time , 300 000 - 350 000 Ks, Education / Training
Office supervisor ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရည်ရွယ်ချက်။	။ သင်ကြားရေးမှအပ ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀ကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ၁။	ထိရောက်သောသင်ကြားရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်� ...
Today , Full time , Education / Training
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ျ နှုတ်အမူအရာနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးစကားအပြောဆိုကောင်းသူခြ၏ဖြစ်ရမည်။
•	Possess Leadership qualities and management skills. •	Strong decision making and analytical skills. •	Strong communication and interpersonal skills. •	Passionate about pre-school education and able to positively engage stakeholders in the holistic development of the child. •	Independent and self-driven team player with the ability to multi-task.
Program Coordinator M/F (1)
ရည်ရွယ်ချက်။	။ သင်တန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်။ ၁။ သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကိ� ...
Today , Full time , 400 - 500 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။	။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်သည့် (သို့) လိုအပ်မည့် ဆရာ/မနှင့်ရုံးဝန်ထမ်းများကြိုတင်ခေါ်ယူ စုဆောင်းခြင်း၊ ရွှေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင် စီမြံ ...
Today , Full time , 200 000 - 250 000 Ks, Education / Training
၁။	Reception စားပွဲတွင် ထမင်းစားချိန်မှလွဲ၍ အချိန်ပြည့် ရှိနေရမည်။ ၂။	Reception နေရာတွင် အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းသပ်ရပ်လှပပြီး မွှေးကြိုင်လန်းဆန်းအောင် ဂရုစိုက်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၃။	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ်အလ� ...
Today , Full time , 400 000 - 500 000 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ Customers အမျာဆုံးရရှိရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်ဂုဏ်သတင်းပြန့်ပွားရေး ကိစ္စရပ်များအတွက် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်� ...
Today , Part time , 1 - 1 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။	။ အဖွဲ့အစည်း၏ HR ဌာန တစ်ခုလုံးအတွက် လိုအပ်သည့် ကိစ္စအ၀၀ အားလုံးကို လုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစွာ ဖွဲ့စည်းလေ့ကျင့် အကဲဖြတ်ပေးရန်။ Key Judies & Responsibilities ၁။	ဌာနအတွက်လိုအပ်သည့် HRD န� ...
Sales & Marketing Representative M/F ( 1)
Today , Part time , Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။	။ ကျောင်းသားအများဆုံးရရှိရေးနှင့် ကျောင်း၏အမည်ဂုဏ်သတင်းပြန့်ပွားရေး ကိစ္စရပ်များအတွက် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ အားလုံး ကို ကြိုတင်ပြင� ...
Quality Assessment & Management Coordinator M/F (2)
Today , Full time , 800 - 800 Ks, Education / Training
၁။	Quality Assessment & Management နှင့် ပတ်သတ်သည့် ကိစ္စအ၀၀ကို သက်ဆိုင်ရာ Assessor များနှင့် လက်တွဲ၍ ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။	လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၀န်ထမ်းများအား ၄င်းအဖွဲအစည� ...
ရည်ရွယ်ချက်။	။ စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှန်ကန်တိကျခြင်းရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စရပ် များအားလုံးကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲအကြံပေးခြင်း။ ၁။	ငွေကြေးစီဆင်းမှုနှင့် အရှုံးအ� ...
1 Day, Full time , Education / Training
•	Daily Cash Recipts အားပုံမှန်သွင်းရမည်။ •	Daily Cash Recipts Book အားနေ့စဉ်ပိတ်ရမည်။ •	Daily Ledger အားပုံမှန်သွင်းရန်။ •	Monthly Profit & Loss Account အားပုံမှန်ထုတ်ရန်။ •	Fixed Assess များအား လစဉ်စစ်ဆေးရမည်။ •	နေ့စဉ် ၀င်ငွေ/ထွက်ငွေစာရင်းကို Voucher များမှသက� ...
•	လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စရေးရာများဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	ကျောင်း၏ Repair and Maintainess ကိစ္စရပ်အားလုံးအစီအစဉ်ရေးဆွဲစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ •	ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး လိုအပ်သောပစ္စများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ •	ရုံးချုပ်နှင့်ကျော ...
Customer Service & Information Executive F (1)
1 Day, Full time , 400 - 450 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။ Customer Service နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀ကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ၁။	ကျောင်းသားရေးရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀နှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို တာဝန်ယူစီမံခန� ...
Business Developer M/F (1)
2 Days, Full time , 700 - 1 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။	။ ကျောင်းသားအများဆုံးရရှိရေးနှင့် ကျောင်းခွဲများ တိုးချဲ့ဖွင့် လှစ်နိုင်ရေးအတွက်နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ အားလုံး ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ေ� ...
2 Days, Part time , Education / Training
•	သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးအကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Primary Teacher ( Assistant ) M/F ( 3)
2 Days, Full time , Education / Training
၁။	ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုစသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို အားပေးလှုံ့ဆော်သော သင်ခန်းစာနှင့် Activities များစီစဉ် သင်ကြားပေးရမည်။ ၂။	ကေ ...
English Language Instructor - Adult M/F (1)
အလုပ်၏သဘောသဘာဝ။	သင်တန်းကျောင်း၏ ညွှန်ကြားမှုနှင့် မူဝါဒအတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုနှင့် စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုများကိုရေးဆွဲရမည်။ မတူညီသည့် background အမျိုးမျိုးမှလာသော ကျောင်းသား/သူများနှင့် မတူညီသောအ� ...
ELT Guest Trainer ( Local ) M/F (3)
2 Days, Part time , 500 000 - 500 000 Ks, Education / Training
Job Description Accountabilities 1.delivering training to the highest standards of ELT 2.enhancing school’s reputation asaLeader in ELT Teacher Training in Myanmar 3.continuing professional development and sharing of best practices Responsibilities 1.Ensuring training meets trainee needs and expectations 2.Ensuring training meets International Quality standards and organizational expectations 3.Maintaining good relationships with customers and colleagues 4.Supporting the ELT Department’s activities and Organization pla ...
3 Days, Part time , Education / Training
•	စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Web Developer M/F (1)
5 Days, Full time , 400 - 500 Ks, Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။	။Customerအများဆုံးရရှိရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်ဂုဏ်သတင်းပြန့်ပွားရေး ကိစ္စရပ်များ အတွက် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင� ...
HR Coordinator M/F (1)
ရည်ရွယ်ချက်။	။၀န်ထမ်းအတွက် Career Path စစ်ဆေးရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Career Planning ၊ Coaching နှင့် Supporting တို့ကို အစ မှ အဆုံး အပြည့်အ၀တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန်။ ၁။	၀န်ထမ်းများအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပင်ကိုယ်� ...
HR Assistant M/F ( 2)
5 Days, Full time , Education / Training
၁။	၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် ဆရာ/မနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင် စီမံခြင်း၊ လစဉ်နှစ်စဉ်၊ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခြင်း၊ ...
Storekeeper M (1)
5 Days, Full time , 250 000 - 300 000 Ks, Education / Training
၁။	ကျောင်းသုံးစာရေးကရိယာများ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းစာရင်းများကို နေ့စဉ် အမြဲမပျက်စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများပြတ်လပ်မှုမရှိအောင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးများအ� ...
ELT Guest Trainer ( Native Speaker ) M/F (3)
5 Days, Part time , 1 - 1 Ks, Education / Training
Pre School Assistant Teacher M/F ( 30)
6 Days, Full time , Education / Training
ရည်ရွယ်ချက်။	မူကြိုဆရာမ၏ အဓိကတာဝန်မှာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဖွံ့ဖြိုးမှု (၅)ရပ်ကို အခြေခံသည့်သင်ခန်းစာရေးဆွဲရန်၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ထိရောက်မှုရှိစွာ ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ကလေးငယ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိ ...
7 Days, Full time , Education / Training
•	ကျောင်းခွဲအသီးသီးရှိ ဆရာမများ/၀န်ထမ်းများနှင့်တာဝန်ခံများ ကျောင်းမှချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ၄င်းတို့၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ေ� ...
•	Possess Leadership qualities and management skills. •	Strong decision making and analytical skills. •	Strong communication and interpersonal skills. •	Independent and self-driven team player with ability to multi-task
7 Days, Part time , Education / Training
•	လူအများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
Admin Staff M/F (2)
7 Days, Full time , 200 000 - 250 000 Ks, Education / Training
၁။	လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရေးရာများအတွက် အထက်အရာရှိအားကူညီခြင်း။ ၂။	ကျောင်း၏ Repair and Maintainess ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၃။	ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ...
Information & Registration Staff M/F (5)
7 Days, Full time , 200 000 - 300 000 Ks, Education / Training
-ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ်အလုပ်များဖြစ်သည့် ဖုန်းလက်ခံစကားပြောခြင်း၊ ဧည့်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းစသည့်အလုပ်များကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ -အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်� ...
•	ထိရောက်သောသင်ကြားရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံဆရာ/မ၊ ၀န်ထမ်း များနှင့် လက်တွဲ၍လိုအပ်သည့် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ •	ကျောင်းသားရေးရာ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ� ...
•	၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် ဆရာ/မနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင် စီမံခြင်း၊ လစဉ်နှစ်စဉ်၊ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခြင်း၊ � ...
84 Days, Full time , Education / Training
•	ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်လေ့လာ ၍ ကျောင်းခွဲများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကို အစီစဉ်ရေးဆွဲ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း •	ကျောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားလာစေရန� ...
93 Days, Full time , Education / Training
• ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်သော ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်လှုတ်ရှားခံစားမှုစသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို အားပေးလှုံ့ဆော်သော သင်ခန်းစာနှင့် Activites များစီစဉ် သင်ကြားပေးခြင်း။ • ကလေးမ� ...
• Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy • Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues • Manage the recruitment and selection process • Support current and future business needs through the development, engagement, motivation and preservation of human capital • Develop and monitor overall HR strategies, systems, tactics and procedures across the organization • Nurtureapositive working environment • Oversee and manageape ...
•	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ်အလုပ်များဖြစ်သည့် ဖုန်းလက်ခံစကားပြောခြင်း၊ ဧည့်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းစသည့် အလုပ်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ •	သင်တန်းကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည် (Cons ...
•	ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေး စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုသာမက ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာစကားကို အခြေခံသော ပြောဆို ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများကိုအားပေးလှုံ့ဆော်သော သင်ခ� ...
•	Finance Executive is required to study the financial transactions made by the organization and prepare financial reports based on the available date. •	Finance Executive needs to share the financial reports with the senior company officials. •	Finance Executive is may be required to suggest ways of improving the company’s financial condition after reviewing the financial reports. •	Finance Executive is required to work on the finance software installed to record the financial transactions. •	Finance Executive is required to ...
•	၁။ သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများနှင့် အရာရှိများမှ ဒါရိုက်တာထံသို့ပေးပို့ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ ၊ရီပို့ (Report)များအချိန်မီပေးပို့ခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ပြန်လည် တင်ပြ ခြင်း၊ဆက်� ...
•	ကွန်ပျူတာ operating systems များနှင့် application များအား အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးရန်။ •	ကွန်ပျူတာ စနစ်နှင့် networks ချိတ်ဆက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရန်။ •	၀န်ထမ်းများ၏ ကွန်ပျူတာ(သို့) ကွန် ...
115 Days, Full time , Education / Training
၁။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းများရရှိနိုင်သည့်နေရာဒေသများ၊ လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများသင်တန်း ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ အလုပ်သမားအေဂျင်စီ၊ မီဒီယာ၊ အင်တာနက်နှင့်အခြားအခြားသော အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်� ...
၁။ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေးကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် ဆရာ/မနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင် စီမံခြင်း၊ လစဉ်နှစ်စဉ်၊ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခြင်း၊ ...
၁။ သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကို အထက်အရာရှိ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းအပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။ သင်တန်းအမျိုးအစားး စုံလင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ သင်� ...
123 Days, Full time , Education / Training
•	Marketing အတွက် အသုံးစရိတ်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲရာတွင် အထက်အရာရှိ၏ ညွှန်ြူကားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ •	ကျောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားရန် Promotion ပွဲများနှင့် ကြော်ငြာ� ...
•	ကျောင်းသားအများစုရရှိရေးနှင့် ကျောင်း၏အမည်ဂုဏ်သတင်းပြန့်ပွားရေးကိုပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	တာဝန်ခံဆရာ/မများ၊ ၀န်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လိုအပ်သည့် ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဆောင်ရွက� ...
•	Marketing အတွက် အသုံးစားရိတ်များကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ •	ကျောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားလာစေရန် Promotionပွဲများနှင့် ကြော်ငြာကိစ္စရပ်များ စီစဉ်ခြင်း။ •	Marketing အတ� ...
•	Oversee the planning and organization ofaquality primary education program in line with the organization’s guidelines. •	Guide staff in the holistic development and care for the children, and buildasafe and conducive environment that best meets their needs. •	Guide and support the development and implementation of teaching and learning approaches and resources, as well as best practices to enhance the learning experiences for the children. •	Manage operations, which include student admission, registration, finance, procuremen ...
•	To perform this job successfully,the individual must be able to perform each essential duty satisfactorily.The requirement listed below are representative of the knowledge,skill,and/or ability required •	Master’s Degree in ELT Management or Teaching English asaSecond Language (or related field) preferred; Bachelor’s Degree with current ESL Diploma or IDLTM and experience acceptable •	Ability to communicate clearly; ability to listen and perceive need,working with people form diverse back-grounds non-judgmentally. •	Ability to ...
•	လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရေးရာများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ •	ကျောင်း၏ Repair and Maintenance ကိစ္စရပ်များအား Admin Executive ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ စစ်ဆေးရန်၊ •	ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး လိုအပ်သောပစ္စည်းမျ ...
Primary Teacher M/F (3)
193 Days, Full time , Education / Training
218 Days, Full time , Education / Training
218 Days, Full time , 700 - 1 Ks, Education / Training
Assistant Accountant M/F (2)
218 Days, Full time , 200 000 - 250 000 Ks, Education / Training
Assistant Accountant (All Centre Income & Stock) ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ၁။ Bank Accounts များသို့ နေ့စဉ်ပေးသွင်းငွေများအား Daily Cash Receipts စာရင်းတွင်ဝင်ငွေအမျိုး အစား အလိုက် နေ့စဉ်ရေးသွင်းရမည်။ ၂။ သက်ဆိုင်ရာ Centre အလိုက် ကျောင်းသားအရေအတွက် (Active List) အာ� ...
218 Days, Part time , Education / Training
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ နှုတ်အမူအရာနူးညံ့သိမ့်မွေ့ပြီးစကားအပြောအဆိုကောင်းသူဖြစ်ရမည်။
Assistant English Language Instructor - Young Learners Education,Childcare & Teaching Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon George English Training Centre (GETC) Education, Childcare & Teaching jobs Education, Childcare & Teaching jobs Assistant English Language Instructor - Young Learners Jobs in Myanmar, jobs in Yangon